नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड छ ? यसरी लिनुहोस् सेवा सुविधा – List Khabar
Home / समाचार / नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड छ ? यसरी लिनुहोस् सेवा सुविधा
नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड छ ? यसरी लिनुहोस् सेवा सुविधा
admin August 5, 2021 समाचार Leaveacomment 88 Views
काठमाडौँ। सन् १९१६ मा नेपालमा पहिलोपटक टेलिफोन लाइन स्थापना भएको १९ वर्षपछि अर्थात् सन् १९३५ सालमा तत्कालीन राजदरबारले बल्ल टेलिफोनको लाइन पायो ।
त्यसपछि सन् १९५५ मा सरकारले सर्वसाधारणका लागि टेलिफोन लाइन वितरण सुरु गर्यो । नेपालमा टेलिफोन स्थापनाको ६४ वर्षको इतिहासले भन्छ– इन्टरनेट प्रविधिको विकासमा सबैभन्दा चाँडो विकास भने नेपालको टेलिफोन क्षेत्रले गर्यो ।
हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, यूटीएलजस्ता टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यहाँ नेपाल टेलिकमले हालसम्म कस्ता सेवा दिएको छ ? सेवा कसरी प्रयोग गर्ने र नेपालमा टेलिफोन लाइनको इतिहास कस्तो छ भन्ने जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
यसरी लिनुहोस् सेवा
काठमाडौं । सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको रहस्य खुलेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्युन गुणस्तरको भनेर प्रमाणित गरेको झण्डै दुई लाख किलो बटर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको खुलिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
गुण नियन्त्रण विभागले अस्वीकृत गरेको संस्थानको बालाजु प्लान्टको भण्डारणमा रहेको उक्त अखाद्य बटर डीडीसीले विक्री गरेको स्रोतको दावी छ । खाद्य प्रविधि विभागले पनि प्रयोगशाला परीक्षण गरेर नष्ट गर्न भनेको उक्त नौनीले उपभोक्तामा कस्तो असर गर्ने हो ? त्यो भने समयले नै बताउला ।
डीडीसीले १ लाख ९४ हजार ९७५ किलो बटर सुजल डेरी पोखराबाट खरिद गरेको जनाएको थियो । उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा गत असोजमा फेला परेको उक्त नौनी करीब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको पनि बताइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला परीक्षणमा गुणस्तर मापदण्ड नपुगेको पुष्टि भएको उक्त नौनी १० महिनाभित्र विक्री भएको हो ।
Previous भोलि देखि लागू हुनेगरी बैङ्कहरुमा लाग्ने भयो यस्तो अनौठो नियम ! एकपटक अवस्य पढ्नु…?